Iiceramics ze-Piezoelectric luhlobo lolwazi olusebenzayo lwezinto zeceramic ezinokuguqula amandla oomatshini kunye namandla ombane omnye komnye. Sisiphumo sepayzoelectric. Ukongeza kwi-piezoelectricity, i-piezoelectric ceramics nayo ine-dielectricity, elasticity, njl., Esetyenziswe ngokubanzi kwimifanekiso yezonyango, i-Acoustic sensors, transducers acoustic, ii-motors ze-ultrasonic, njl.
Iiceramics ze-Piezoelectric zisetyenziswa ikakhulu ekwenziweni kwee-ultrasonic transducers, underwater acoustic transducers, electroacoustic transducers, ceramic filters, ceramic transformers, ceramic discriminators, high voltage generator, infrared detectors, surface acoustic wave devices, electro-optic Devices, igniting and detonating devices, I-piezoelectric gyros, njl., Ayisetyenziswanga kuphela kumacandelo obuchwephesha, kodwa nakubomi bemihla ngemihla ukukhonza abantu kunye nokwenza ubomi obungcono ebantwini.
KwiMfazwe yesibini (II) yeHlabathi, kwafunyanwa iiceramics zeBaTiO3, kwaye izixhobo zepiezoelectric kunye nokusetyenziswa kwazo kwenza inkqubela phambili ye-epoch. Kwayenano BaTiO3 powder yenza ukuba kunokwenzeka ukuvelisa i-BaTiO3 Ceramic eneempawu ezingaphezulu.
Ekupheleni kwekhulu lama-20, oososayensi bezinto ezivela kwihlabathi lonke baqala ukuphonononga izinto ezintsha zokwenza umbane. Ngethuba lokuqala, umxholo wezinto ze-nano waziswa kuphononongo lwezixhobo ze-piezoelectric, ezenza uphando kunye nophuhliso lwezixhobo ze-piezoelectric, izinto ezisebenzayo, bajongana nentuthuko enkulu, ebonakaliswe kwizixhobo. Utshintsho kwintsebenzo kukuba iipropathi zoomatshini, iipropathi ze-piezoelectric, kunye neepropathi ze-dielectric ziphuculwe kakhulu. Oku ngokungathandabuzekiyo kuya kuba nefuthe elihle ekusebenzeni kwetransducer.
Okwangoku, eyona ndlela iphambili yokwamkelwa kwengcinga yemitha ye-nano kwizixhobo ezisebenzayo zepiezoelectric kukuphucula iipropathi ezithile zezinto zepiezoelectric materials (yongeza ii-nanoparticles ezahlukileyo zokwenza i-nano complexes kwizixhobo ze-piezoelectric materials) kwaye (usebenzisa i-piezoelectric nanopowders okanye i-Nanocrystals kunye neepolmers zenziwe ngezinto ezidityanisiweyo iindlela ezizodwa) iindlela ezi-2. Umzekelo, kwisebe lezinto zeThanh Ho University, ukuze kuphuculwe ukusasazeka kwe-polarization kunye nentsalela yokuhlukaniswa kwezinto ze-ferroelectric ceramic materials, ii-Ag nanoparticles zongezwa ukulungiselela “i-nano-multiphase ferroelectric ceramics based on nanoparticles / ferroelectric ceramics”; Ezifana nano alumina (AL2O3) / PZT,i-nano zirconium dioxide (ZrO2)/ I-PZT kunye nezinye i-nano composite ferroelectric ceramics ukunciphisa izinto zokuqala ze-ferroelectric k31 kunye nokunyusa ukuqina kwentliziyo; izinto ze-nano piezoelectric kunye neepolymers ngokudibeneyo ukuze zifumane izinto ezidityanisiweyo zepanozoelectric. Ngeli xesha siza kufunda ngokulungiswa kwee-piezoelectric ceramics ngokudibanisa i-nano piezoelectric powders kunye ne-nano organic additives, emva koko sifunde utshintsho kwiipropathi zogesi kunye neepropathi zedielectri.
Silindele ukusetyenziswa okungaphezulu nangaphezulu kwezinto ze-nanoparticles kwizinto zeceramics ze-piezoelectric!